Raphael Varane Oo Diyaar U Ah Inuu Ka Tago Real Madrid
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Raphael Varane oo diyaar u ah inuu ka tago Real Madrid
Daafaca dhexe ee Real Madrid Raphael Varane ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiseynayo inuu ka tago kooxda inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Daafaca reer France ayaa diyaar u ah inuu soo afjaro 10 sano oo uu ku sugnaa caasimada Spain wuxuuna raadinayaa loolan cusub maadaama uu ku sii dhawaanayo heerkiisii ​​ugu sareeyay.
Sida laga soo xigtay Sport , Raphael Varane kaliya 18-bilood ayaa uga harsan qandaraaska uu haatan kula joogo Los Blancos mana xiiseynayo inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxda heysata horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa sidaas darteed, waxay ku qasban tahay inay bilowdo inay dhageysato dalabyada Varane xagaaga, madaama kaliya labo bilood uu uga harsan yahay qandaraaskiisa kooxda, ama ay halis ugu jiraan inay beeca xorta ah ku lumiyaan dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
27 jirkaan ayaa Real Madrid kaga soo biiray kooxda reer France ee Lens xagaagii 2011. Varane ayaa in ka badan 300 kulan u saftay kooxda, waxaana uu ku guuleystay 18 abaalmarin oo waa weyn, oo ay ku jiraan seddex La Liga, hal Copa del Rey, afar UEFA Champions. Horyaallada horyaalka iyo afar koob oo FIFA Club World Cup ah.
Previous articleTababaraha kooxda Manchester United oo Cadeeyay Sadexda Xidig ee Muhiimka u ah Hormarka Kooxda
Next articleChelsea oo lagu booriyay inay u tixgeliso Hasenhuttl bedelka Lampard